काठमाडौं (पहिचान) भदौ ४ – देश संघीयतामा गएपछि नेपालमा सात प्रदेश भएका छन् । प्रदेशका आ आफ्नै राजधानी छन् । देशको केन्द्रीय राजधानी भने काठमाडौंले पहिलेदेखि नै परिचित छ । विश्लेषण गर्नेहरुले संघीयतालाई राम्रो र नराम्रो भनेर आ आफ्ना स्वार्थ अनुकुल व्याख्या गरेको सुनिन्छ, पढिन्छ र हेरिन्छ ।
देश संघीयतामा गएसँगै अधिकारको आवाज अझ वलियो भएको देखिन्छ । जातजाती, भाषाभाषी, लिंग, बर्ग सवैले आफ्नो ठाउँ खोजिरहेका छन् । भाषामा पनि नेपाल भित्रै तामाङ, शेर्पा, लिम्बु, गुरुङ, नेवार मात्रै होइनन क्षेत्रगत भाषा बोल्नेहरु पनि भेटिन्छन् । नेपालको स्याङजा जिल्लामा कन्नो दुख्यो भन्दा काठमाडौं शहरका मान्छे हाँस्छन् ।
एउटै काम गर्ने र अर्थदिने शरीरका अंगकै बारेमा ठाउँ अनुसार फरक फरक शब्दको चयन हुने गरेको छ । तर, सबैले आ आफ्नो सम्मान खोजेका छन् । समान अधिकारका लागि लडेकाहरु विस्तारै फेरी एकजुट हुने तयारीमा देखिन्छन् ।
२०७२ साल बैशाख २९ गते काठमाडौंको धुम्वाराही पुगेर छलफलमा बस्ने वित्तिकै भुइचालो आयो । सबै भागे तर, एक जना व्यक्ति ढोकाको आँड लिन्छन् र भन्छन् भाग्नु हुँदैन । ति व्यक्ति अहिले भने सम्पर्कमै छैनन् । बुढानिलकण्ठ स्कूलको माष्टर छाडेर आएका व्यक्ति थिए रे उनी ।
देशमा ७ सय ६१ सरकार छन् । सरकारमा पुग्नका लागि संवैधानिक रुपमै हरेक पाँच पाँच बर्षमा चुनाव हुने व्यवस्था गरिएको छ । २०७६ साल साउन १६ गते १८ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मतदान गर्न पाउँनेछन् । उपनिर्वाचन हुने संघिय एक, प्रदेश १ सहित स्थानीय तहसम्मै चुनाव हुँदैछ । मंसिर १४ गतेका लागि तोकिएको चुनावको उम्मेदवार दर्तादेखि मतगणनासम्मको तालिका भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
मतदाताको सूचिमा पुरुष र महिला बाहेक उसले अन्य लिंग छुट्ट्याएको छैन् । सरकारी निकायमा नियुक्तीका लागि परीक्षा लिने लोक सेवा आयोगले समेत उत्तर पुस्तिकामा पुरुष र महिला भन्दा अन्य कोलम राखेको छैन । समावेशी भएन भनेर अहिले पनि आन्दोलन भइरहेको छ । काठमाडौंको पुतलीसडकमा लाठी खोस्न सुरक्षा निकायलाई हम्मे हम्मे परेकै हो ।
गाईजात्राको भोलीपल्ट भएको समावेशीको आन्दोलनमा आउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नेलाई आन्दोलनमा तेस्रोलिंगीलाई समावेश गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रतिपश्न गरिएको थियो । पुतलीसडकको आन्दोलनमा कतिजना तेस्रोलिंगी पक्राउ परे भन्ने समाचारमा आउँदैन । प्रहरी र सर्वसाधारणले दिने सूचना पहिले संख्या हुन्छ । अनि मात्रै महिला र पुरुष । तेस्रोलिंगी सोधिदैन ।
पहिलो पटक समलिंगी तेस्रोलिंगी सुनेकाहरु आत्तिन्छन् । सुनिरहेकाहरु मात्तिन्छन् । मात्तिनेहरुले नाम लिने ठाउँ हो ठमेल । ठमेल २४ सै घण्टा खुल्ने काठमाडौंको पर्यटकिय ठाउँ हो । ठमेल लगायतका धेरै ठाउँमा किन फरक लैंगिक पहिचानलाई नोटिस गरिन्छ त ? नेपालमा तेस्रोलिंगी पहिचान भएका व्यक्ति मात्रै छैनन् । पुरुष समलिंगी, महिला समलिंगी, अन्तरलिंगी र द्धिलिंगीको संख्या तेस्रोलिंगीको भन्दा धेरै छ । भिजिविलिटी भने तेस्रोलिंगीकै देखिन्छ ।
उनीहरु सुरुवातदेखिनै सामूहिक आन्दोलनमा छन् । समग्रमा उनीहरुलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआई) भन्ने गरिएको छ । सरकारले एलजीबीटीआईलाई अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता, पासपोर्ट दिइरहेको छ ।
आफू भन्दा फरक देख्ने वित्तिकै नोटिस गर्नेहरु नेपालमा मात्रै होइनन्, संसारका प्राय सबै देशमा भेटिन्छन् । २ बर्षको उमेरमा नेपालबाट बेलायत गएका लेक्स लिम्वुलाई साथी संगतमा त्यस्तै नोटिस गरे । बेलायतमा समेत आफू भन्दा भिन्न व्यवहार देख्नेहरु छन् । युरोपका धेरै देशहरुमा अझै पनि समान अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा यति हुनुलाई उनी गर्व गर्छन ।
उनलाई गर्व गर्ने आँट १४ बर्षको उमेरमा आयो । म त नेपाली हुँ । नेपालको माया गर्छु । आफ्नै खर्चमा नेपाल आएर टि सर्ट विक्री गरेको पैसाले घुमघाम गरेर फेरी उनी शनिवार बेलायत फर्कदैछन् ।
नेपाल र नेपालीका लागि माया गरेर स्वदेशी भूमिमा फरर नेपाली बोल्ने लेक्स नेपाललाई माया गर्ने जीवन साथी चाहन्छन् । अहिलेसम्म उनले एक सय १० प्रतिशत माया गर्ने केटा भने भेटेका छैनन् ।
हेर्नुहोस भिडियो कुराकानी